Jonga umfanekiso kunye ne-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukuguqulwa komfanekiso nge-AutoCAD
Kwesinye isithuba esathetha malunga neemephu ze-georeferencing ezifundwayo okanye imifanekiso yeGoogle Earth, sibone indlela yokwenza ngayo ngeMpawu y nge Microstation, kulezi zingeniso unokubona ezinye iinkcukacha zendlela yokufumana umfanekiso weGoogle Earth, ulungelelaniso lwe-utm kunye nendlela yokuwasika.
Ngoku makhe sibone indlela yokujonga ngayo umfanekiso nge-AutoCAD
1 Faka izicwangciso
Ukufaka ii-UTM izikhokelo kwi-AutoCAD, zenziwa ngomyalelo wephuzu. (Ukudweba / iphuzu / amanqaku amaninzi)
ngoko sifaka iikhowudi ngale ndlela:
ukusuka kwibha yomyalelo kuya kuba:
khomba, ngenisa, lungelelanisa, ngena, ulungelelanise, ngena ... de ubabeke bonke.
Ifomathi yolungelelwaniso yile: "coordinate x" , "coordinate y", ukuze babe
Ukuba inkqubo akakholeki, mhlawumbi ngenxa yokuba indawo yolawulo uqwalaselo ayofomati engaguqukiyo, ngoko ubhale kwilayini yomyalelo PDMODE = 2
Ukuba awuziboni amanqaku okanye ajongeka amancinci kakhulu, khetha ifomathi / izitayile zekhomba / kwaye ukhethe ifomathi ebonakalayo ngakumbi.
Unako kwakhona ukuzithengisa kuzo
Xa ufaka amanqaku kufuneka ukhangele ngale ndlela:
Ngoku into emasiyenze kukufaka umfanekiso, oku kwenziwa "ngokufaka / umphathi womfanekiso"
Sicofa iqhosha "fakela", emva koko umfanekiso uyakhangelwa kwaye ubonisa ukuba indawo yokufaka kunye nesikali iya kuyenza isebenze kwiscreen.
Emva koko sikhetha ikhoneni lekhohlo, kunye ne-snap isebenze kwinqanaba, kwaye ngasezantsi ngakwesokudla.
Eyenziwe, umfanekiso u-georeferenced kwiinqununu ezichaziweyo.
2 Ichanekileyo kangakanani idatha ye-Google Earth ye-cadastre?
Ungayisebenzisi le mi sebenzi emininzi, ngokuba idatha yeGoogleEarth ayisebenzi kuyo. Ngaphambili besithetha ngengcaciso” ezinedatha kaGoogle Earth.
Enkosi ngolwazi lwekhadinali. Inika umdla kakhulu
IJOSE SALAS F uthi:
UErnesto CArdenal uthi:
Ndifumene into eluncedo kwimifanekiso ye-georeference kwi-AutoCad enefayile ehambelanayo "yehlabathi":
Isikhundla esitsha seGeoRefImg sokubekwa kwakhona kwimifanekiso eqokelelweyo ngokuzenzekelayo ngokweefayile zeHlabathi (i-VLX ye-AutoCAD 2004/2005/2006, 2007/2008 kunye ne-ADT)
Ole! Ndiyabonga! Awazi ukuba ndiyayixabisa njani.
Sawubona uRuth, ukuthabatha umfanekiso kukho ezinye izixhobo kwaye unokwenza uhlaziyo olusisigxina lokuhlaziya isikrini.
ku thabatha ngomzobo
Kwakhona kwezi zikhundla ndithetha malunga nendlela onokuyenza ngayo kwi-agcgis
kwaye ngaphezu kwakho konke ndincoma ukuba ubone iposi evela themes apho kukho iindlela ezininzi zokukhuphela, ukulayishwa kunye nokulinganisa
Molo ... .. kwaye uyazi ukuba ungawuthatha njani loo mfanekiso kuGoogleEarth kunye nokujonga oko kwi-ARcGis? Ungaluncedo olukhulu ukuba ungandinika uthsuphe.
Fredy Jimenez uthi:
Molo, enkosi, iluncedo kakhulu, ndiyayixabisa into yokuba ulufakile olu lwazi kwi-intanethi kwaye ukuba unezinye malunga nesi sihloko, nceda uthumele kum, enkosi….